IFiji Private Island Beachfront Retreat
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguCourtney
Ngaphandle kwegridi ecocekileyo ephambi kolwandle ukubaleka kwindlu yembali yaseFiji. Iilwandle zeSanti eziMhlophe. Isiqithi saseTropiki esingenakonakala.
Yonwabela ukuphuma kwelanga okumangalisayo kunye nokutshona kwelanga ukusuka ekusongeleni kwakho kwiveranda. Hamba izinyuko ezimbalwa kunye ne-snorkel enye yezona zixhobo zimangalisayo kuyo yonke iFiji! Phakama iibhodi zokubheqa, iihammocks, izitulo zomngangatho kunye nempahla eninzi enobunewunewu ilindele ukuba ufumane ikona yokufunda, uphumle, kwaye wonwabele ii-cocktails zokutshona kwelanga kunye ne-citrus evela kwipropathi! Ilungele iintsapho.
Izakhiwo ezibini, indlu ephambili kunye nendlu yeendwendwe yabucala, ilungele iintsapho ezi-2, ukubaleka kwezothando, ihoneymoon, okanye yonke indawo ejikeleze iholide ye-epic. Iimbono ezimangalisayo ukusuka kwindlu, iidesika, okanye ukujonga phezulu phezulu kwesiqithi. Fumana iparadesi yakho kwindawo ezolileyo yaseNananui-Ra.
Indlu enkulu inamagumbi okulala ama-2, ngalinye lineebhedi zenkosi eziphakamileyo ezinokumkani, ikhitshi eligcweleyo kunye neebhafu ezi-2. Indlu yeendwendwe inegumbi elinye nokumkani, igumbi lokuhlala, ikhitshi eligcweleyo kunye negumbi lokuhlambela. I-air conditioning kwi-master kunye negumbi lokuhlala. Umhlambi nomomisi.
ISola inikwe amandla emini kunye nejenereyitha esebenza ebusuku.